Microsoft Band 2 Review: kasị Ike - News Ọchịchị
Microsoft Band 2 Review: kasị Ike
The Microsoft Band 2 abụghị ndị kasị mara mma, ndị dị ọnụ ala ma ọ bụ fọdụrụ n'ezinụlọ na-adịgide adịgide mma tracker dị. Ma ọ na-juru n'ọnụ na sensọ na nghọta, na bụ otu n'ime ndị kacha n'ụzọ zuru ezu-agba trackers na-ebi ndụ.
Juru n'ọnụ na sensọ, ala-eyi na-enweghị ndidi sweaty mgbe na-enye na-akpali omimi gị ụra, mmega ahụ na ahụ ike
Isiokwu a na-akpọ “Microsoft Band 2 nyochaa: otu n'ime ihe kasị ike na bara uru na-agbatị trackers” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Friday 22 January 2016 07.00 UTC
Microsoft nke abụọ nke inwale na-eme ka a mma tracker bụ a otutu ihe ọma na mara mma karịa nke mbụ ya, juru n'ọnụ na sensọ na dịtụ mfe na-ebi ndụ.
The mbụ Microsoft Band bụ a chunky, clunky ngwaọrụ, na mgbe, na ụzọ ụfọdụ, ọ bụ ihe ọma na karịa ngwaọrụ na ọ dị mkpa ka ike na-eyi uko ka nkwojiaka, ya nwere ihe karịrị a obere whiff nke mpụ nkwonkwo ụkwụ tracker banyere ya.
Fit na imecha
The gbalaga nwere a curved ngosi, mgbanwe roba n'akụkụ na a siri ike akpụ na Nleta mgbachi na e dere ihe batrị na electrodes maka sensọ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Microsoft Band 2 ọwa na plastic ihuenyo n'ihi na a ozodimgba iko ngosi na a metal ahu. Ya anya ọma, dị mfe ọgụgụ na a doo anya AMOLED ngosi, nke na-kụrisịa ma ọ kpụchara akpụcha na ọnwa abụọ nke na-eji ya mgbe niile. Ndị ọzọ nke gbalaga ka nke a siri ike ma na-agbanwe nwa roba na a metal mgbachi na a plastic mmaji abụọ metal kọntaktsị na ya.
The mmaji bụ batrị, na metal kọntaktị bụ maka ụfọdụ nke anụ sensọ. The mgbachi bụ a eji, push-button ntọhapụ, nke bụ magburu onwe. Ị nwere ike were ya ma gbanyụọ na ịgbanwe ya mfe na ada na - nnọọ uru mgbe ị na-ịmafe n'etiti a nkasi obi kwesịrị ekwesị n'ihi na ọ bụla-ụbọchị nsochi na a tighter kwesịrị ekwesị iji gbochie ya na-akpụ akpụ na gburugburu on your nkwojiaka mgbe aga n'ihi na a ọsọ.
Na elu na ala nke gbalaga jide ya na ebe on nkwojiaka na-enweghị na n'akụkụ nke gbalaga enwe na-abụ uko, nke pụtara na ọ bụ ọtụtụ obere sweaty karịa ụfọdụ ndị asọmpi. Eyi site rubbing on a uwe elu cuff bụ doro anya na anya mgbe ọnwa abụọ, Otú ọ dị. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ọ dabara n'okpuru a uwe elu cuff, abụghị sweaty na-adịghị ga-eche uko on your nkwojiaka. Ọ bụ na-mfe pịnye na ọ on, dị ka ìgwè gburugburu n'akụkụ gị nkwojiaka bụ mkpa, ma n'isi on roba egosi doro anya ihe ịrịba ama nke na-eyi mgbe naanị a di na nwunye nke ọnwa.
The Band 2 bụ waterproof, ma bụ ọsụsọ na-àmà. Ọ dịghị showering na ya na, ma ọ bụ igwu mmiri, ma ọ ga-adị ndụ arụsi-enweghị nsogbu.
Display: 12.8mm x 32mm AMOLED (320×128 pikselụ)
Njikọta: Bluetooth 4.0
ndakọrịta: Android 4.3+, iPhone 4S ma ọ bụ mgbe e mesịrị, Windows Phone 8.1 ma ọ bụ mgbe e mesịrị
sensọ: Ngwa anya obi ọnụego, 3-axis accelerometer, gyrometer, GPS, ambient ìhè, UV, akpụkpọ okpomọkụ, capacitive sensor, galvanic akpụkpọ nzaghachi, barometer
Ihe mmetụta-juru n'ọnụ
The ngwa anya obi ọnụego ihe mmetụta etiede ke nkwojiaka n'okpuru ngosi, -eme ka a siri ike na kọntaktị na wearer si akpụkpọ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Band 2 bụ otu n'ime ndị kasị technologically elu mma trackers dị na 10 dị iche iche sensọ na a okwu. Ụfọdụ n'ime sensọ-enye kpọmkwem Gụọ-outs, dị ka mgbe nile ngwa anya n'obi-ọnụego ihe mmetụta (nke bụ otu n'ime ihe ndị kasị ezi M na-anwale), na UV ihe mmetụta na GPS. Ndị ọzọ na-eji na Nchikota ịchọpụta nzọụkwụ na ọrụ, track arụsi na ihe ndị ọzọ.
Dị ka mbụ Microsoft Band, ụfọdụ n'ime sensọ na o yiri ka a ga-eji, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ na data bụ onye ọrụ inweta ma.
Ọtụtụ n'ime ndị ọmụma pụrụ anya na gbalaga onwe ya, ma ọ bụ site na ngwa na web ngwa, nke bụ otu n'ime ndị kasị mma m na-eji na ihe ọ bụla mma tracker.
The Band 2 na-tracks ụra na nwere a vibrating mkpu na-eteta gị na nke kacha mma oge. The dere data bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị akpali nke ọ bụla ụra tracker m na-anwale. Ọ na-egosikwa ọkọlọtọ ìhè, miri na edinem idap markings n'abali. Ma m nwere ike na-ahụ na mgbe m na-aṅụ a biya ma ọ bụ iko mmanya tupu bed obi m adịghị eru ya izu ike 49 gafere kwa nkeji ruo mgbe mmanya e sụrụ si m usoro ke n'etiti abalị.
Ụra nsuso bụ-adọrọ mmasị karịsịa, enye ịghọta ihe karịrị nanị ole mgbe ma ọ bụ otú nnọọ na i na-ehi. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Na na na na-arahụ ụra, ma ha ṅụrụ mmanya na-egbu oge izu ike m, nke na-akọwa ihe mere ọbụna obere mmanya eme ka ihe m na ike gwụrụ ke usenubọk.
Microsoft Health ndị a jupụtara obere iberibe ọmụma na-eme ka a ụwa nke dị iche na m nghọta nke data, na ọ na-rụọ ọrụ na onye ọ bụla update. Ndị ọzọ na nyiwe na-adịghị na-enye nnọọ otu inferences ma ọ bụ zuru ezu na-enweghị na-akwụ ụgwọ a kwa ọnwa ego.
Onye nke kasị mma ọhụrụ atụmatụ bụ inwe ike iru omenala arụsi na bulite ha na Band, nke nwere ike mgbe soro gị na-enwe ọganihu, ma obu site na dechara reps ma ọ bụ oge.
Custom arụsi bụ otu n'ime ndị Band siri ike ihe, -edu gị jee ma atụ reps ma ọ bụ oge. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ọ bụ ngwa na mfe ime. M wuru a 10-nzọụkwụ circuit-ọzụzụ na ise nkeji, uploaded m ya Band na n'ebe m gara. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ị na-eme na e nwere ọtụtụ tupu kenyere omume na eme, zuru ezu na nnọọ mma nkọwa videos, ịhọrọ site na.
-Agba ọsọ nsuso bụkwa ndị magburu onwe, na-na ịnọgide na-enwe a ọnọdụ fix na GPS, ọ bụ ezie na ọ bụghị ezi dị ka irè dị ka a raara onwe ya nye na-agba ọsọ na nche maka obi-ọnụego gbalaga ọzụzụ.
Microsoft si 'taịl nile' bụ obere ngwa ọdịnala na-eme ihe ndị dị gbalaga, site nsuso ụra na-enye ama Ịma Ọkwa. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
N'ofè siri ike mma emeele feature set, na Band 2 akpa àgwà dị ka a pseudo-smartwatch. Ọ nwere ike na-egosi Ịma Ọkwa si a smartphone, gụnyere oku, nwere music njikwa na abụọ mgbata nke a button, na nwere taịl nile maka Twitter, Facebook, ozi, ebuka, Weather na Starbucks, nke na-ahapụ gị kwụọ ụgwọ maka kọfị na a barcode.
Jikọọ Windows Phone ọrụ nwere ike ịnweta Microsoft si virtual nnyemaaka Cortana ka asụọ ọmụma na ịrụ olu akara. Ọtụtụ n'ime ndị ọzọ na atụmatụ, gụnyere music playback akara ọrụ na android na iOS kwa.
Chaja magnetically attaches na njedebe nke eriri na plọg n'ime a USB ike nkwụnye. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Microsoft Band 2 dịruru nanị ihe karịrị ụbọchị abụọ n'etiti ebubo na m ule. Iji GPS n'ihi na a ọsọ belatara ndụ batrị, dị ka ọ na-eji ya dị ka a nche na ihuenyo on nile ma ọ bụ na-enwe Ịma Ọkwa zigara mmachi. M'we hu ihe-ebo ya ruo ihe 20 nkeji a ụbọchị - 10 nkeji mgbe showering ma 10 nkeji mgbe brushing m ezé tupu bed - bụ iji na-ya n'etiti 50 na 80% ebubo.
Ya n'ụzọ zuru ezu ebubo na nanị ihe karịrị otu awa na a USB, magnetik chaja na Obere vidiyo na na na njedebe nke eriri na a siri ike ighota.
The Microsoft Band 2 -efu £ 200 na atọ nha, obere, ọkara na nnukwu, ma naanị otu onye na agba. n'ihi na ha tụnyere, na Fitbit Jizi Emekarị na-efu £ 200 na yiri nkọwa.
The Band 2 ga-eyi n'ime na n'èzí nke nkwojiaka, ebe a na-egosi obi ọnụego. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Microsoft Band 2 abụghị ndị kasị mara mma, ndị dị ọnụ ala ma ọ bụ fọdụrụ n'ezinụlọ na-adịgide adịgide mma tracker dị. Ma ọ na-juru n'ọnụ na sensọ na nghọta, na bụ otu n'ime ndị kacha n'ụzọ zuru ezu-agba trackers na-ebi ndụ. Ọ bụ cross-ndakọrịta na Android, iOS na Windows na-otoro, dị ka ndị ngwa ọdịnala na data anya nke Microsoft si Health ngwa.
Ọ na-eme ezi, advanced gbalaga na-eyi nakwa dị ka a ogbi nche, -adaba n'okpuru a uwe elu cuff, ma bụ obere bara uru dị ka ihe si-na-esi smartwatch. E nwekwara ajụjụ akara gburugburu ogologo oge ọ ga-adịru, enwe anya gosiri ihe ịrịba ama nke wear ke akpa ọnwa abụọ.
Uru: sensor-juru n'ọnụ, -aga n'ihu obi ọnụego, GPS, ọ bụghị sweaty, adịghị dọpụtaara ntutu, ezi data anya, cross-usoro ụzọ, ọ dịghị kwa ọnwa ego, oké ụra nsuso, omenala mmega regimes / nsuso, Ịma Ọkwa
Ọghọm: ọ bụghị waterproof, ezi chunky, roba na-egosi ihe ịrịba ama nke wear, ndụ batrị pụrụ ịdị mma
The mgbachi ọrụ n'ezie ọma ikwe mfe na-na-ada ukpụhọde nanị site eji ya tinyere oghere. The mgbachi na-nwere a UV ihe mmetụta na ya. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Microsoft Band review: sensor-juru n'ọnụ - ma ọ bụrụ na ị na-emetụta na-achọ ka onye dara
Fitbit anya nyochaa: a mma nsuso na nche ka bụghị nnọọ ibu
Android, Nkeji edemede, Fitness, Ngwa, IOS, Life na style, Microsoft, Nyocha, Samuel Gibbs, Technology, wearable technology, Windows Phone
← 15 Funny ihe ị pụrụ Pịnye n'ime Google Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 8 Review →